जवानी फर्काउने कसरत : यार्सादेखि भिएग्रासम्म
काठमाडौँ, स्वयम्भूका ५५ वर्षीय रोशन कार्की (नाम परिवर्तन) व्यापारी हुन्। दुई सन्तानका बाबु उनमा यौन दुर्बलता थियो। कामकाजमा व्यस्त हुने उनी दिनहुँजसो मदिरापान गर्थे। श्रीमतीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न मन नलाग्ने र गर्न खोजे पनि लिंग उत्तेजित नहुने समस्याले हैरान भएका उनलाई उनका साथीहरूले रक्सीमा यार्सागुम्बा डुबाएर खाए यौनशक्ति बढ्ने सल्लाह दिए।
रोशनले चर्काे मूल्यमा यार्सागुम्बा खरिद गरेर रक्सीको बोतलमा डुबाउने र त्यही रक्सी सेवन गर्न थाले। यार्सागुम्बा डुबाइएको रक्सी सेवनपछि यौनक्षमता बढ्ने आशमा उनले रक्सी सेवन अझै बढाए। रक्सीको मात्रा बढ्दै गएपछि उनको यौनेच्छा झनै ह्रास हुँदै गयो। उनी अल्कोहलिक हुने चरणमा पुगे। बढी रक्सी सेवन गर्न थालेपछि उनलाई उनकी श्रीमतीले मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्यकहाँ उपचारका लागि पुर्‍याइन्। डा. शाक्यका अनुसार साथीहरूले यार्सागुम्बा डुबाइएको रक्सी खाँदा यौनक्षमता बढ्छ भनेर दिएको गफ पत्याउँदा रोशन थप समस्यामा परेका थिए।
६० वर्षका प्रकाश शर्मा (नाम परिवर्तन) मधुमेहका बिरामी हुन्। उनी आयुर्वेदिक औषधिको पछि लागेर यौन क्षमता बढाउने धुनमा छन्। डिप्रेसनको पनि समस्या भएका उनी पनि डा. शाक्यकोमा नियमित परामर्शका लागि आउँछन्। उनले यौनक्षमता बढ्छ भनेर अदुवा, सिलाजित, पाँचऔँले आदि सेवन गरिरहेका थिए। डा. शाक्यले डायबेटिजका कारण ह्रास भएको यौनक्षमता यस्ता औषधि खाएर बढ्दैन भनेर ‘काउन्सिलिङ’ गर्दा पनि उनले पत्याएनन्।
‘यौनशक्ति बढाउनेसम्बन्धी थुप्रै भ्रमका पछि लागेर उनले अदुवा, लसुन, माछा, भँगेराको मासुलगायत खाने गरेको छु भन्नेहरू उपचारका क्रममा दिनहुँ भेट हुन्छ,’ डा. शाक्य भन्छन्। यौनसँग सम्बन्धित समस्या ९० प्रतिशत मानसिक र बाँकी १० प्रतिशत शारीरिक तथा अन्य रोगसँग सम्बन्धित रहेको कुरा पत्याउन अधिकांश मानिस तयार नभएका कारण हल्लाका भरमा धेरैले जथाभावी औषधि र अन्य खानेकुरा खाइरहेको डा. शाक्य बताउँछन्।
‘स्त्री र पुरुषबीच यौन सम्बन्धमा जटिलताहरू मूलतः तीन कारणबाट आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘मानसिक, शारीरिक र मनोशारीरिक। प्रौढ अवस्था यस्तो उमेर हो, जसमा तीनटै कारणले यौन जटिलता आउन सक्छ।’ उनका अनुसार जवानी फर्काउने कसरतमा कसैले गफ दिएको भरमा आयुर्वेदिक भन्दै जे पायो त्यही खाँदैमा घट्दै गएको यौनक्षमता बढ्दैन।
काठमाडौँ, पुतलीसडकस्थित माता मनकामना आरोग्य केन्द्रका डा. बद्रीप्रसाद भट्टराईकहाँ दिनहुँजसो उमेर ढल्किसकेका पुरुषहरू यौनशक्ति बढाउने चाहनामा आउँछन्। केही समयअघि मात्रै उनीकहाँ ८४ वर्षीय दुर्गाप्रसाद (नाम परिवर्तन) उपचारका लागि आए। शारीरिक रूपमा हेर्दा ६० वर्षका जस्ता लाग्ने उनी पेशाले इन्जिनियर हुन्।
‘धेरैले यौन उत्तेजनाका लागि भिएग्रा खान्छन्,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘५० एमजी नर्मल डोज हो। तर, दुर्गाप्रसाद ‘चार सय एमजी भिएग्रा खाँदा पनि भएन’ भनेर आएका थिए। त्यसबाहेक अन्य औषधि पनि उनले लापरबाहीपूर्वक खाएका रहेछन्।’ विज्ञापनको पछि लागेर खाएको औषधिले यौनशक्तिमा झन् ह्रास आएपछि उनी डा. भट्टराईकहाँ आएका थिए। ‘हामीले मानिसलाई प्राकृतिक रूपमा उपचार गर्ने मात्रै हो,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘यसको मतलब ८१ वर्षको वृद्धलाई १८ वर्षको जवान बनाउन सकिँदैन। हामीले गर्ने भनेको प्राकृतिक तवरले कमजोरीलाई सुधार्ने मात्र हो।’
झट्ट हेर्दा अव्यावहारिक र आश्चर्यजनक लागे पनि उमेर ढल्किँदै गएपछि पुरषहरूको यौन चाहना बढ्दै जाने डा. भट्टराई बताउँछन्। ‘बुढेसकालमा मानिसहरू दायित्व र कर्तव्यबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई करिअर बनाउने, घरसम्पत्ति जोड्ने, छोराछोरी पढाउने चिन्ता हुँदैन। यो अवस्थामा मानिस कि अध्यात्मतिर लाग्छ कि मनोरञ्जनतिर। मनोरञ्जनमा सबैभन्दा कमन मनोरञ्जन सेक्स हो।’
यौनशक्तिमा ह्रास आएको थाहा पाए प्रायः पुरुषले घरेलु उपाय अपनाउने गरेको डा. भट्टराईको अनुभव छ। ‘घिउ, मह, लसुन, फर्सीको बियाँ, खरबुजा, काजु, बदाम, दूधबाट मानिसले समाधान खोजिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कहिल्यै नखाने मान्छे र त्यही चिज लामो समयदेखि खादै आएको छ भने त्यो लाभकारी हुन्छ। तर, यसमा औषधिको जस्तो प्रभाव हुँदैन।’ बुढेसकालसम्म यौनशक्ति कायम राख्न युवा अवस्थादेखि नै तयारी चाहिने उनी बताउँछन्।
‘सकारात्मक सोच र नियमित व्यायामले यौन जीवन पछिसम्म बलियो बनाइराख्छ,’ उनले भने, ‘बुढेसकालमा स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति, पाचान शक्ति बलियो हुनुपर्छ भन्ने खोजी कहिल्यै हुँदैन। तर, मान्छेहरूलाई यौनशक्ति चाहिँ बुढेसकालमा पनि जवानीको जस्तो चाहिन्छ।’
कतिपयलाई शरीर कमजोर हुँदा पनि यौनेच्छा किन हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ।
‘यसका लागि हामीले शरीर र मनको विषयलाई बुझ्नुपर्छ,’ योग गुरु योगी विकासानन्द भन्छन्, ‘मन कहिल्यै बूढो हुँदैन। बूढो नभएको मनले यौनेच्छा राख्नु स्वाभाविक हो। मन आफैँमा आकांक्षा र इच्छा हो। त्यसैले शरीर जति बूढो भए पनि मनले इच्छा गरिरहन्छ।’ अधिकांश मानिसले यौनलाई नै प्रमुख सुखका रूपमा बुझेको उनी बताउँछन्। ‘प्रकृतिमा मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो, जसले बच्चा जन्माउनबाहेक मनोरञ्जनका लागि पनि सहवास गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यौनलाई मुख्य सुख वा मनोरञ्जनको माध्यम बुझेकाले नै मानिस तनले नसके पनि मनले इच्छा गरिरहन्छ। अर्काेतर्फ शरीर शिथिल हुँदा पनि वीर्य बन्ने प्रक्रिया रोकिएको हुँदैन, जसले गर्दा पनि मानिसमा यौन चाहना रहिरहन्छ।’
‘पावर बुस्टर’को भ्रम
‘डाक्साब, म ६५ वर्षको भएँ। साथीको लहैलहैमा लागेर महँगो पावर बुस्टर भन्ने सेवन गरेको फिटिक्कै काम गरेन।’
‘भिएग्रा र पावर बुस्टर भन्नेमा कुन चाहिँले स्टामिना बढाउँछ ?’
‘डाक्साब, प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु। मैले पावर बुस्टर सेवन गर्न मिल्छ ?’
‘मलाई ब्लू फिल्ममा जस्तो लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राख्न मन छ। पावर बुस्टरले फाइदा गर्छ रे, हो ?’
विगत केही समयदेखि पावर बुस्टरसम्बन्धी यस्ता प्रश्न गर्ने व्यक्तिहरूले यौनरोग विशेषज्ञ डा. सुमनराज ताम्राकारलाई दिक्क लगाइरहेका हुन्छन्। नेपाली पुरुष वा दम्पतीबीच पावर बुस्टर चर्चाको विषय बनेको उनी बताउँछन्। परिणाम सही वा गलत जेसुकै भए पनि कतिपय अवस्थामा नेपालीहरूमाझ यसको ‘ह्विम’ चलेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले यसलाई पछिल्लो सेक्स स्टामिना बढाउने कडीका रूपमा लिन थालिएको छ,’ डा. ताम्राकार भन्छन्, ‘पावर बुस्टरका नकारात्मक असरहरू छन्। अग्र्यानिक वा आयुर्वेदिक वा जेजस्तो दाबी गरिए पनि यो साइड इफेक्टबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदैन। पावर बुस्टरको सेवन गर्ने नै हो भने यसका सही उपयोग, फाइदा, बेफाइदाबारे जानकारी लिनुपर्छ।’
यार्सा र भियग्राका कुरा
फोक्सो र मिर्गौलाको समस्यामा यार्सागुम्बा प्रयोग गरिने भएकाले लिंग उत्तेजनाको समस्या भएकालाई लाभदायक हुन्छ भनेर बढी प्रचार गरिने गरिएको डा. सुमनराज ताम्राकार बताउँछन्। यार्सागुम्बाको सेवनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता मजबुत बनाउने, थकान मेटाउने, रगत बढाउने, कोलेस्टेरोल घटाउने काम गर्नुका साथै मुटुको चाल गडबडी, हेपाटाइटिस बी, रक्तअल्पता, श्वासप्रश्वासको रोग, मुटुको रोग र कलेजोको रोगमा पनि फाइदा पु¥याउने उनी बताउँछन्।
भिएग्राले अपेक्षाकृत उत्तेजना पैदा गरिदिने डा. ताम्राकार बताउँछन्। ‘भिएग्राले यौनांगमा नाइट्रिक अक्साइडको कामलाई बढावा दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा लिंगको मांसपेशी खुकुलो हुन्छ। जसका कारण रक्तप्रवाह बढ्न गई यौनांगको कमलो तन्तु बिस्तारै कडा र दह्रो हुँदै आउँछ।’
भिएग्रा सेवनले धेरैजसोलाई टाउको दुख्ने, तातो अनुभव हुने, नाक रसिलो हुने, आँखा धमिलो हुने, उज्यालोमा हेर्न कठिनाइ पर्ने र कतिपयले सबै कुरा निलो देख्ने समस्या हुने डा. ताम्राकार बताउँछन्। ‘रक्तचाप स्वाट्टै घट्ने, हृदयाघात हुने, मस्तिष्कघात हुने, एक्कासि कान नसुन्ने आदि समस्या हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उच्च रक्तचाप र एचआईभीको औषधि खाइरहेकाले भिएग्रा सेवन गर्नु हुँदैन। उनीहरूका निम्ति भिएग्रा हानिकारक हुन सक्छ।’ त्यस्तै, मुटु, कलेजो र मिर्गाैलाका रोगीले पनि भिएग्रा सेवन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘यौन आनन्द लिने नाममा उमेर ढल्केकाहरूका लागि पावर बुस्टर कुनै पनि हालतमा सान्दर्भिक छैन,’ उनी भन्छन्।
डा. रवि शाक्यका अनुसार कतिपयले यौन चाहना बढ्छ भन्दै भिएग्रा सेवन गर्छन्।
‘यसले यौन चाहना बढाउने र उत्तेजित नै नहुने लिंगलाई कडा बनाउने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अलिअलि कडा हुने लिंगमा ब्लड सर्कुलेसन बढाएर पूर्ण रूपमा उत्तेजित बनाउनमा मात्र भिएग्राले सहयोग पु¥याउन सक्छ। चिकित्सकको परामर्शबिना भिएग्रा सेवन गरे ज्यानै जाने
जोखिम पनि हुन सक्छ।’
लिंग उत्तेजित नहुने समस्या
लिंग उत्तेजित नहुनुको शारीरिक मात्रै नभई मनोवैज्ञानिक कारण पनि हुन सक्ने डा. शाक्य बताउँछन्। ‘यौन चाहना नहुनु तथा लिंग उत्तेजित नहुनुलाई शारीरिक कारणबाट हेरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो समस्याको प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक नै हो।’ उनका अनुसार मनोसामाजिक कारणबाट पनि यो समस्या देखापर्न सक्छ। भन्छन्, ‘पत्नी आकर्षक नलाग्नु, पति–पत्नीबीच मनमुटाव हुनु, पार्टनर यौनक्रियाप्रति व्यावहारिक नहुनु, अस्वस्थ भइरहनु, यौन सम्बन्ध स्थापित गर्दा अरूले देख्ने, समातिने र दण्डित हुने डर र चिन्ता, विफलताको भावना आदिले गर्दा पनि लिंग उत्तेजित नहुने समस्या आउन सक्छ।’
कुनै पनि औषधि खानुअघि सबैभन्दा पहिले लिंग उत्तेजनाको समस्याको कारण मनोवैज्ञानिक हो कि शारीरिक, त्यो पहिचान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यस्तो स्थितिमा समस्याको सही कारण पत्ता लगाउन विशेष जाँच गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
केले गडबड हुन्छ यौन जीवन ?
मधुमेहका रोगी, मानसिक रोगी, हाइपर टेन्सनको औषधि सेवन गरिरहेका मान्छे, ‘साइकोजेनिक’, अत्यधिक मद्यपान गर्ने र लागुऔषध सेवन गर्नेको यौन जीवन गडबड हुने डा. शाक्य बताउँछन्। ‘डिप्रेसनको समस्या भएको व्यक्तिको सेक्स लाइफ पनि बर्बाद हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिप्रेसन महिला–पुरुष दुवैमा सेक्स समस्या पैदा गर्ने प्रमुख कारण हो। डिप्रेसनबाट पीडित अधिकांशलाई सेक्सप्रति रुचि हुँदैन।’ डिप्रेसनले यौनेच्छामा कमी ल्याउनुका साथसाथै यौन प्रक्रियामा समेत असर गर्ने उनी बताउँछन्। ‘डिप्रेसनका कारण लिंगमा कडापना नआउने र शीघ्रपतनको समस्या देखापर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता समस्याले डिप्रेसन झन् बढ्ने गर्छ। सेक्स समस्याबाट पीडित व्यक्तिले कतै आफू डिप्रेसनबाट पीडित त छैन भन्नेप्रति ध्यान दिनुपर्छ। समस्या पत्ता नलगाईकन यौनशक्ति बढाउने भन्दै जथाभावी औषधि खाँदा हानिबाहेक केही हुँदैन।’
यौनमा खाना र औषधिको प्रभाव
‘कुनै पनि खाद्यवस्तु वा पदार्थले शरीरमा वा रगतमा नाइट्रिक अक्साइडको मात्रा बढाउँछ,’ डा. ताम्राकार भन्छन्, ‘यस्ता खानेकुराले यौन उत्तेजना नै त नभनौँ, कम्तीमा लिंग कडा पार्ने काम चाहिँ गर्न सक्छन्।’ कतिपय मान्छे सुनेका भरमा यस्ता खाद्यवस्तु खान्छन्। ‘एक टुक्रा नरिवल वा एक गेडा काजु खाँदैमा यौनशक्ति बढ्छ भन्नु भ्रम हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आरु, स्ट्रबेरी, एभोकाडो, खरबुजा, केही ड्राई फ्रुट, अण्डा, कफी आदिलाई यौनवद्र्धक खाद्यवस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ।’ भिटामिन ‘ई’ले पनि हर्मोन उत्पादनमा सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्। ‘सिमी र कुरिलोका साथै चकलेट, फर्सीको बियाँ र खुर्सानीलाई पनि यौनवद्र्धक नै मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केरा, गाजर, गोलभेँडा, स्याउ आदि यौन स्वास्थ्यका लागि राम्रा मानिन्छन्। तर, यसको मतलब कुनै खास खानेकुराले यौनशक्ति बढाउँछ भन्ने कदापि होइन।’
यौन क्षमता बढाउने नाममा ब्रह्मलुट
‘यौनसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको ग्यारेन्टीका साथ उपचार गरिन्छ’ भनेर खोलिएका केन्द्र र पसलबाट जोगिनुपर्ने डा. शाक्य बताउँछन्। ‘कस्मेटिक प्रोडक्ट वा चकलेट खरिद गरेजसरी विदेशबाट आयात गरिएका यौनशक्ति बढाउने भनिएका औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ उनको सुझाव छ।
राजधानीलगायत देशका विभिन्न शहरमा खुलेका यौन रोग उपचार केन्द्रहरूले शीघ्रपतन, यौन सन्तुष्टि, यौन चाहना, स्वप्नदोष, स्तन सानो वा ठूलो पार्नेदेखि महिलाको गुप्तांग टाइट गर्ने, पुरुषको लिंग लामो र मोटो बनाउनेलगायत आकर्षक ‘नारा’ दिँदै उपभोक्तालाई ठगिरहेको उनको आरोप छ। ‘शतप्रतिशत उपचारका नाममा भ्रामक विज्ञापन दिँदासमेत नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी निकायहरू एकले अर्कालाई दोष दिएर उपचारका नाममा ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइरहेका छन्।’
नेपालमा यौनवद्र्धक औषधि आयात तथा बिक्री गर्ने संस्था कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन। शहरका चोक–चोक र गल्ली–गल्लीमा भेटिइने यस्ता संस्थाले विभिन्न नाम र ब्रान्डका तेल, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, जेल, स्प्रे, बिक्री गरिरहेका भेटिन्छन्। ‘मलेसिया, भारत, चीनलगायत देशबाट औषधि ल्याएर नेपाली नाम दिएर रिप्याकिङ गर्ने चलन पनि छ,’ डा शाक्य भन्छन्, ‘जर्मनी, अमेरिका, जापान, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कोरियालगायत देशबाट आयात हुने भनिए पनि अधिकांश यस्ता औषधि चीनबाट भित्त्याइन्छन्। आफूलाई सेक्सोलोजिस्ट दाबी गर्ने कतिपयले मनोचिकित्सकले प्रेस्काइब गर्ने औषधि खोलबाट निकालेर यौनशक्ति बढाउने औषधि भन्दै बेच्ने गरेको पनि पाइन्छ।’
औषधि ऐनअनुसार कुनै पनि ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलम, तेल, स्प्रेजस्ता औषधिमा पर्ने वस्तुमा उत्पादक कम्पनीको नाम, ब्याच नम्बर, मूल्य, म्याद सकिने मिति, उत्पादन मिति, सञ्चय गर्ने तरिका, प्रयोग गर्ने विधि, औषधीय तत्त्वको नाम र परिणाम प्रष्टसँग नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। तर, बजारमा भेटिएका यस्ता औषधिमा माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुरा भेटिन्न।
कानुनतः यस्ता उत्पादनको आयात, बिक्री–वितरण, विज्ञापनदेखि यस्ता संस्थाको सञ्चालन एवं परामर्शसमेत अवैध हो। औषधि ऐनअनुसार त्यस्तो अवैध कारोबारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ र एक वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, आजसम्म यस्ता बिक्रेतालाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गरेको पाइएको छैन। यस्ता औषधि बिक्रेतालाई तीन वर्ष कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय, भ्रामक विज्ञापन गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
ऐनमा लेखिएको छ– यस्ता औषधिले शरीरको कुनै अंग क्षीण गराए वा शक्तिहरण भएमा १० वर्ष कैद वा जरिवाना, अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यस्ता औषधि वा वस्तुले शारीरिक हानि गरेमा औषधि व्यवस्था विभागमा उजुरी दिन सकिन्छ। औषधिले हानि–नोक्सानी गरेको छ भने उत्पादक कम्पनीले पीडित पक्षलाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ। तर, तथाकथित यौनवद्र्धक औषधिहरू विभागमा समेत दर्ता छैनन्। अधिकांश यस्ता औषधिमा मूल्यसम्बन्धी पुराना स्टिकर उप्काएर मनपर्दी मूल्य राखिएको हुन्छ।
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्याय भ्रामक विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि यौन उत्तेजना जगाउने विभिन्न खालका भ्रामक विज्ञापनको अफवाह नफैलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको बताउँछन्। ‘पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा प्रकाशन, प्रसारण हुने यस्ता विज्ञापनले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई नै असर पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हुँदै नभएको कुरालाई ‘ग्यारेन्टी’, ‘पुनः उपचार’, ‘पैसा फिर्ता’ जस्ता कुरा गरेर भ्रम फैलाइएका छन्। यौनका विषयमा खुलेर कुरा नगर्ने हाम्रो समाजलाई यस्ता संस्था तथा औषधिले आफ्नो हतियार बनाउने गरेका छन्। यस्ता कुराको नियमन गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो।’
तर, आयुर्वेदिक औषधिले प्रतिप्रभाव (साइड इफेक्ट) गर्दैन भन्नेमा आफू विश्वस्त भएको उनी बताउँछन्। ‘रोग पत्ता नलागी र आवश्यकताभन्दा बढी खाइयो भने पानीले पनि हानि गर्छ,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘पाँचऔँले मह, माछा, यार्सागुम्बा, काउछाको बीज आदिलाई यौनशक्ति बढाउने चिजका रूपमा लिइन्छ। उमेरअनुसार समय र मात्रा मिलाएर खाँदा यिनले फाइदा पु¥याउन सक्छन्।’
आयुर्वेदिक उपचारलाई डा. बद्रीप्रसाद भट्टराई ‘टाइम टेस्टेड’ उपचार पद्धति मान्छन्। ‘यो पुरानो उपचार पद्धति हो,’ उनी भन्छन्, ‘हजारौँ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको र साइड इफेक्ट नदेखिने भएकाले यसको प्रभाव बढेको हो। यसलाई कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारले परीक्षण गरेको होइन, मानव जातिको विश्वास र समयले पास गरेर पठाएको हो।’
यौनशक्तिवद्र्धक मानिने केही जडीबुटी
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायका अनुसार नेपालमा प्रयोग गरिने यौनशक्तिवद्र्धक केही जडीबुटी यी हुन्ः
यार्सागुम्बाः विश्वमा हालसम्म कर्डिसेप्स वर्गमा पर्ने ढुसी (स्याक फंगस) का ६ सय ८० भन्दा बढी प्रजाति पत्ता लागेका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा परिचित ढुसी यार्सागुम्बालाई अंग्रेजीमा ‘क्याटरपिलर फंगस’ भनिन्छ। यो नेपाल र तिब्बतका हिमाली भेगमा पाइने एक प्रकारको बहुमूल्य जडीबुटी हो। यसलाई वैशाख १५ देखि जेठ १५ बीचको समयमा टिपेर प्रशोधन गरी विभिन्न खाद्य पदार्थमा मिसाई वा औषधिमा सम्मिलित गरी प्रयोग गर्दा शरीरका सम्पूर्ण प्रणालीलाई स्वस्थ राख्ने र खास गरी यौन ऊर्जा बढाउने विश्वास गरिन्छ।
अदुवाः पुरुषको यौनशक्ति बढाउनका लागि अदुवाको प्रयोगलाई आयुर्वेदमा उपयोगी मानिएको छ। यसले पुरुषको लिंगलगायत सम्पूर्ण यौन क्षमताको विकास गर्ने गरिन्छ।
बेलको पातः बेल यस्तो रूख हो, जसको पातलाई हिन्दू संस्कृतिमा शिवको पूजा–आराधना गर्दा चढाउन आवश्यक मानिन्छ। बेलका पातको नियमित सेवन गर्नाले मानसिक शक्ति विकास हुने र एकाग्रता बढाएर त्यसको माध्यमबाट पुरुषमा लिंग उत्तेजना गर्ने र त्यसलाई आवश्यक समयसम्म कायम राख्न सकिने विश्वास गरिन्छ।
महः महमा ‘फ्रुक्टोज’ नाम गरेको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, जो माहुरीद्वारा मह बनाउन प्रयोग गरिने फूल र वनस्पतिबाट प्राप्त हुन्छ। यसलाई नियमित रूपमा रातिको भोजनपछि सेवन गर्नाले शक्ति प्राप्त हुने र त्यस शक्तिले खास गरी यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न र त्यसलाई कायम राख्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ।
लिचीः लिचीमा पुरुषत्व र प्रजननशक्ति बढाउने शुक्रकीटको क्षमता बढाउने तŒवहरू भएको मानिन्छ। यसका अतिरिक्त यसले कमजोरी घटाउने र स्फूर्ति बढाउने तथा पुरुष यौनांगमा शिथिलता आउन नदिने विश्वास गरिन्छ।
माछाः खास गरी ओएस्टर, लब्स्टर, मुसेल तथा अन्य जातका माछा, तिनमा पाइने तेल र तिनका टाउकामा यौनवद्र्धक तŒव हुने विश्वास गरिन्छ।
अश्वगन्धाः झारका रूपमा जमिनमा उम्रने यो वनस्पति आयुर्वेदिक हिसाबले मस्तिष्कको तीक्ष्णता र यौनशक्तिको निरन्तरताका लागि अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ।
पाँचऔँलेः नेपालका विभिन्न भागमा पाइने यो वनस्पति आयुर्वेदमा शास्त्रीय हिसाबले पनि यौनक्षमता वृद्धिका लागि उपयोगी मानिन्छ।
केशरः यो खाद्य तत्व पनि आयुर्वेदिक दृष्टिकोणबाट यौनक्षमता र मानसिक एकग्रताका लागि उपयोगी मानिन्छ।
काउछोको बीजः काउछो कोसे वनस्पति हो। यसको बीउलाई धुलो बनाएर नियमित रूपमा खाँदा पुरुषको यौन स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसबाट यौन दुर्बलता तथा नपुंसकता हराउँछ भनी आयुर्वेदमा उल्लेख छ। यो निकै तीतो हुन्छ।
कस्तो छ बालबालिकाको 'जेल' ?
सृजना खड्का/युवराज भट्टराई
प्रहरीको सिठीले पीडित पोखरा
२० साउन २०७६
बलात्कारीलाई तातो भात !
१३ साउन २०७६
मायालुसँग मिलेर मर्डर
देशमा पत्नीपिडीत पनि छन्
उपेन्द्र अर्याल/युवराज भट्टराई
२४ असार २०७६